एनसेलले कर तिर्नुपर्छ, छुट दिउँदैन – प्रधानमन्त्री दाहाल » खबरहरुको एउटै केन्द्र
एनसेलले कर तिर्नुपर्छ, छुट दिउँदैन – प्रधानमन्त्री दाहाल
आईतवार, चैत्र २७, २०७३ १३:०० मा प्रकाशित !
२७ चैत, काठमाडौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ले एनसेललाई कुनै पनि हालतमा कर छुट नदिने र राज्यलाई तिर्नुपर्ने करका विषयमा सम्झौता नहुने दृढता व्यक्त गरेको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद सार्वजनिक लेखा समितिको आजको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, “एनसेलले राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्नु पर्दछ । कुनै पनि सर्तमा छुट दीँदैन, दिने भन्ने पनि हुँदैन । तर विगतमा कर नतिराई बिक्रेता किन भाज्ञ्ो वा भगाइयो भन्नेबारेमा पनि छानबिन हुन्छ र दोषीमाथि कारबाही गरिन्छ ।”
प्रधानमन्त्रीले कर नतिर्नेलाई सबै उपाय अवलम्बन गरेर असुल गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको र छिटोभन्दा छिटो कर तिराएरै छाडिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।
उनले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा सामान्य रुपमा चर्चा भएको विषयमा गलत र नकारात्मक तवरले टिप्पणी भएको भन्दै सरकारको मनसाय छिटोभन्दा छिटो कर तिराउन के गर्ने भन्ने मात्रै रहेको बताए ।
वैदेशिक लगानीको विषयमा समेत सकारात्मक प्रभाव पार्ने गरी ऐनसेलको करको विषय शीघ्र निरुपण गराउन सरकारको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै उपाय अवलम्बन गरिने र संसदीय समितिले दिएको निर्देशनको पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरे ।
सरकारले के भएको हो, किन कर तिर्ने विषयमा ढिला भइरहेको छ भनेर सम्बन्धित तालुकदार मन्त्रालय अर्थलाई ताकेता गरेको स्पष्ट पार्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “राज्यले प्राप्त गर्ने कर सम्बन्धित पक्षले तिर्नुपर्छ । त्यसमा कुनै पनि प्रकारको मोलाहिजा हुँदैन । सरकारको प्रष्ट धारणा पनि विगतमा कर नतिराई किन छाडियो भन्ने छ । सो विषयमा हामी प्रष्ट छौँ ।”
प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मौखिक रुपमा किन ढिला भएको हो कर तिर्ने विषय भनेर छलफल भएको जानकारी गराए । राज्यले तदारुकता लिने हो भने कर उठाउन कुनै समस्या नरहेको समेत प्रधानमन्त्रीको स्पष्टोक्ति थियो ।
प्रधानमन्त्रीले भने, “एनसेल कहीँ गएको छैन, सरकारले चासो लिएको छ । कर उठाउन कुनै समस्या छैन । सरकार आम सरोकारकै आधारमा कर उठाउन लागिरहेको छ ।” तर एनसेलको तत्कालीन प्रवद्र्धक टेलियाले भने कर नतिर्ने भन्दै सार्वजनिक रुपमा नै धारणा राख्दै आएको छ । उसले नेपालमा कर तिर्ने आफूहरुको दायित्व नरहेको र कर छुटसम्बन्धी सम्झौतामा नेपाल र नर्वेले हस्ताक्षर गरेको भन्दै पुँजीगत लाभकर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
प्रधानमन्त्रीले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार एनसेललाई कर तिर्नुपर्ने र अर्थ मन्त्रालय मातहतका निकायले आवश्यक पहल गरिरहेको समेत समितिलाई जानकारी गराए । प्रधानमन्त्रीले क्रेता तथा बिक्रेता दुवैलाई सँगै राखेर भए पनि कर तिराउने वातावरण बनाइने प्रष्ट पारे । तर मलेसियाको सरकारी कम्पनी एक्जियटाले भने आफूहरुलाई समस्या परेको भन्दै सरकारलाई पत्र लेखेको प्रधानमन्त्रीले समितिमा उल्लेख गरे ।
प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको कुरा बाँझिएको भन्नेमा पनि सत्यता नभएको भन्दै उनले सरकारको सकारात्मक चासो मात्रै रहेको स्पष्ट पारे । संसदीय समितिले एनसेललाई सरकारले कर छुट दिन्छ कि भनेर राखेको चिन्ता जायज रहेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले भने, “तपाईँहरु निश्चिन्त हुनुहोस । करका विषयमा कुनै सम्झौता हुँदैन । सरकार कर उठाउन प्रतिबद्ध छ । तर विषयलाई सकारात्मक तवरले टुङ्ज्ञ्ाउनुपर्छ भन्ने मात्रै सरकारको चासोको विषय हो ।”
समितिको बैठकमा सांसदहरुले आयकर ऐन, २०५८ अनुसार कर उठाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । सांसद रामहरि खतिवडाले पुँजीगत लाभकर बिक्रेताले नै तिर्ने भएकाले किन उसलाई छुट दीयो र कर असुली किन गरिएन भन्ने प्रश्न गम्भीर रहेको बताए ।
उनले भने, “नेपाली नागरिकले सामान्य कारोबार गर्दा कर तिर्नुपर्ने भए पनि त्यति ठूलो कम्पनी भाग्दा सरकारी निकाय किन मुकदर्शक भयो, त्यसको समेत छानबिन गरिनुपर्दछ ।” बाह्र पटकभन्दा बढी एनसेलको स्वामित्व खरिद बिक्री भएकाले ती सबैबाट पुँजीगत लाभकर तिराउनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
सांसद धनराज गुरुङले कर छुट दिने र नउठाउने कर्मचारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने धारणा राखे । सांसद गुरुङले भने, “लेखा समितिले गत जेठ २२ गते बिक्रेताबाट कर असुल गर्न निर्देशन दिएको छ । सोही निर्देशनका आधारमा टेलियाबाट कर असुल गरिनुपर्छ ।”
सांसद भरत शाह र अमृतलाल राजवंशीले कर अधिकृतले नै पुँजीगत लाभकर असुल गर्नुपर्ने भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा नै छलफल हुनु न्यायसङ्गत नभएको बताए ।
सांसद विकास लम्साल र हरिचरण साहले कर नउठाउने कर्मचारीलाई कारबाही गरेर जरिवाना र क्षतिपूर्तिसमेत असुल गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
सांसद भास्कर भद्राले कर नतिर्दासम्म एनसेलको सेवा नै बहिष्कार गर्नुपर्ने र बाध्य तुल्याएर कर तिराउनुपर्ने भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद आनन्द पोखरेल र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लले पटकपटक एनसेलको विषयमा नै संसदीय समितिमा छलफल हुनु दःुखद रहेको भन्दै तत्काल समस्या समाधान हुनुपर्ने बताए ।
सभापति डोरप्रसाद उपाध्यायका अनुसार पुँजीगत लाभकरका विषयमा भएको गडबढी तथा दोषीमाथि कारबाही गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत पत्र लेख्ने निर्णय भएको छ । यसअघि संसद्कै अर्को समिति अर्थ समितिले समेत एनसेलको पुँजीगत लाभकर तिराउन सरकारलाई निर्देशन दीसकेको छ ।
PREVIOUS POST Previous post: आवधिक योजनाका उद्देश्य पूरा गर्न अझै बाँकी – प्रधानमन्त्री दाहाल
NEXT POST Next post: टोखादेखि थानसिंह फाँटसम्म सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने तयारी
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते आईतवार, चैत्र २७, २०७३ १३:००
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस आईतवार, चैत्र २७, २०७३ १३:००
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण आईतवार, चैत्र २७, २०७३ १३:००
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी आईतवार, चैत्र २७, २०७३ १३:००
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? आईतवार, चैत्र २७, २०७३ १३:००